မကြာခဏ ၀မ်းချုပ်နေလျှင် – Healthy Life Journal
By Prof. U Aye Mon
ပါမောက္ခဦးအေးမွန် (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
မေး။	။ လူတွေမှာ ၀မ်းချုပ်တာက ပိုအဖြစ်များလာပါသလား ဆရာ။
ဖြေ။	။ ဆရာ့အတွေ့အကြုံအရ ပြောရရင်တော့ လူတွေက အရင်နဲ့စာရင် အလုပ်တွေ ပိုရှုပ်လာတယ်၊ ၀မ်းသွားဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ဘူး၊ အစားအသောက်မှာလည်း အဆင်သင့်အစာတွေကို စားလာကြတယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လည်း အချိန်မပေးနိုင်ဘူး . . ဒီအချက်တွေကြောင့် ၀မ်းချုပ်တာက ပိုအဖြစ်များ လာကြပါတယ်။ လူ့ဘ၀မှာ အေးအေးဆေးဆေးမရှိတော့ဘဲ လောလော လောလောနဲ့ လုပ်နေရတဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲလာတာကြောင့် ၀မ်းချုပ်တာက ပိုအဖြစ်များလာပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ လူအများစုက အိမ်သာကို အေးအေးဆေးဆေးတက်ဖို့တောင် အချိန်မရသလို ဖြစ်နေကြပါတယ်။
မေး။	။ ၀မ်းချုပ်တာကို ခွဲစိတ်ကုသရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ရှိပါသလား ဆရာ။
ဖြေ။	။ ၀မ်းချုပ်တယ်ဆိုတာ ရောဂါမဟုတ်ပါဘူး။ ၀မ်းချုပ်တာက ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုပါ။ ဘာနဲ့ အလား သဏ္ဍာန်တူလဲဆိုတော့ ဖျားတာနဲ့ တူပါတယ်။ ဖျား တာကလည်း အူအတက်ရောင်တာကြောင့် ဖျားတာရှိသလို တခြားအကြောင်းတွေကြောင့်လည်း ဖျားတတ်ပါတယ်။ ဖျားပြီဆိုရင် ဖျားစေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကို ရှာပြီး ကုသရပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ၀မ်းချုပ်ရင်လည်း ၀မ်းချုပ်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတွေကိုရှာပြီး ကုသရပါတယ်။ ၀မ်းချုပ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းက အူကင်ဆာ၊ လိပ်ခေါင်း စတာတွေ ဖြစ်နေရင် ခွဲစိတ်ကုသဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါ ခွဲစိတ်ကုသ မှုပေးရပါတယ်။
၀မ်းမချုပ်အောင်လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေကို အကြမ်းဖျင်းပြောရရင်တော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက အချိန်မှန်မှန် ၀မ်းသွားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ရေများများ သောက်ရမယ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံ များများစားပေးရပါမယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရမယ်။ ပြီးရင် ၀မ်းသွားတာကို အာရုံစိုက်ပြီး ပုံမှန်သွားနိုင်အောင် ကျင့်ပေးရပါမယ် . . .
မေး။	။ ၀မ်းချုပ်စေတဲ့ ရောဂါတွေက ဘယ်နှမျိုးလောက် ရှိပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ။	။ ၀မ်းချုပ်စေတဲ့ရောဂါတွေက အများကြီးပါပဲ။ ဘာအကြောင်းကြောင့်မှန်းမသိဘဲ ၀မ်းချုပ်တာကအဖြစ် များပါတယ်။ အဲဒါကို ဆေးပညာအရ Primary Constipation လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ၀မ်း ချုပ်ရတယ်ဆိုတာ အထင်ပဲရှိပါတယ်။ အတိအကျ မသိပါဘူး။ ဥပမာ- ရေသောက်နည်းလို့၊ လေ့ကျင့် ခန်းမလုပ်လို့၊ အထိုင်များလို့၊ ၀မ်းသွားတာကို အချိန်မှန် မကျင့်လို့၊ ၀မ်းသွားတာကို အာရုံမစိုက်လို့၊ မနက်မိုးလင်းရင်အလုပ်သွားဖို့ ပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေရတာနဲ့ ၀မ်းသွားဖို့အချိန်မရလို့၊ ၀မ်းသွားချင်စိတ် ပေါ်တဲ့အခါ အိမ်သာက အဆင်သင့်မရှိလို့၊ အဆင်သင့်ရှိရင်လည်း ညစ်ပတ်တဲ့ အိမ်သာမှာ မသွားတတ်လို့ . . စတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် ၀မ်းချုပ်တာမျိုးပါ။ ဒါက မှန်းဆပြီး ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။	။ ၀မ်းချုပ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိတဲ့ အခြေအနေကော ရှိပါသလား ဆရာ။
ဖြေ။	။ ၀မ်းချုပ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိတာလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို Secondary Constipation လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် ၀မ်းချုပ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဥပမာ- အူကင်ဆာ၊ လိပ်ခေါင်း၊ အူပိတ်တာ၊ စအိုကျဉ်းတာစတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးကြောင့် ၀မ်းချုပ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အကြောင်းရင်းတွေကို သေချာသိရင် ကုသမှုပေးလို့ရပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါရှိတာ၊ သံဓာတ်ပါတဲ့ ဆေးမှီဝဲရတာ၊ တချို့ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ကြောင့်ဝမ်းချုပ်တာ . .စတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် ၀မ်းချုပ်ရင် ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ကုသလိုက်ရုံနဲ့ သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ဟိုက်ပိုသိုင်းရွိုက်ရောဂါကြောင့်လည်း ၀မ်းချုပ်တတ်ပါတယ်။
မေး။	။ ၀မ်းချုပ်စေတဲ့ အကြောင်းနှစ်ခုအနက် ဘယ်အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ။	။ အကြောင်းမသိဘဲ ၀မ်းချုပ်တာက ပိုများပါတယ်။
မေး။	။ ၀မ်းချုပ်တာ ကြာရင်ကော ရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား ဆရာ။
ဖြေ။	။ ၀မ်းချုပ်တာကြာပြီး မစင်တွေက ဗိုက်ထဲမှာ အကြာကြီး နေနေရင် အူနဲ့ မစင်ထိတွေ့မှုကြောင့် ကင် ဆာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ အူကင်ဆာ အဖြစ်များရတာက ၀မ်းချုပ်တာကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ မကြာခဏ ၀မ်းချုပ်တာက နှစ်ချီပြီး ကြာသွားရင် အူကင်ဆာဖြစ်တတ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ၀မ်းချုပ်ရင် ညှစ်ညှစ်ပြီး သွားရပါတယ်။ အဲဒီလို သွားရတာကြောင့် လိပ်ခေါင်း ဖြစ်စေ နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဖြစ်တတ်တာက စအိုကွဲတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ၀မ်းသွားရင် နာလို့ ၀မ်းမသွားဘဲ နေတော့ ပိုပြီး ၀မ်းချုပ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပိုညှစ်ပြီး ၀မ်းသွားရတဲ့အခါ အနာတွေက ပိုဆိုးသွား ပြန်ပါတယ်။
မေး။	။ ၀မ်းမှန်မှန်သွားအောင် မြန်မာဆေး၊ အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေ သောက်တာ၊ ၀မ်းချူဘူး သုံးတာကရော ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ။	။ မြန်မာဆေးတွေ၊ အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေကို နှစ်နဲ့ချီပြီး စားလာတဲ့အခါ အူတွေက သူ့အလိုလို မညှစ်တော့ ပါဘူး။ ၀မ်းသွားဖို့ ဆေးကိုပဲ မှီခိုတဲ့ အနေအထား ဖြစ်သွားပါတယ်။ ၀မ်းချူတာကလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ အသက်ကြီးသူတွေ ၀မ်းချူတာထက် အသက်ငယ် ငယ်ရွယ်ရွယ်အချိန်မှာ ၀မ်းချူတဲ့ အကျင့်ဖြစ်သွားရင် ပုံမှန်အတိုင်းအူလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ဘဲ ၀မ်းချူမှပဲ ၀မ်းသွားသလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ သဘာဝအတိုင်း ၀မ်းသွားတာကပဲ ကောင်းပါတယ်။ ဒီလို အကျင့်တွေရှိရင် အူကအလိုလို မညှစ်တော့တဲ့အတွက် ဒါတွေကို တစ်သက်လုံး မှီခိုရသလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
မေး။	။ ၀မ်းမှန်မှန်သွားအောင် ပုံမှန်သုံးနေကျ ဆေးတွေ မသုံးဘဲ တခြားဆေးတွေသုံးနေတာမျိုးကော ရှိပါ သလား ဆရာ။
ဖြေ။	။ ၀မ်းမှန်မှန်သွားအောင် ပုံမှန်သုံးနေကျ ဆေးတွေအပြင် ဆေးဝါးအသစ်တွေကို စမ်းသပ်နေပါတယ်။ အဲဒါက အူလမ်းကြောင်းမှာ ရှိတဲ့ Chloride Channel ပွင့်တဲ့ ဆေးကို စမ်းသပ်နေတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီဆေးက ဆိုဒီယမ်နဲ့ရေကိုဆွဲပြီး ၀မ်းပိုသွား အောင် လုပ်နိုင်သလားဆိုတာ စမ်းသပ်နေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဆီရိုတိုနင်ဟော်မုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စမ်းသပ်နေတာပါ။ အဲဒီဟော်မုန်းများလာရင် ညှစ် အားပိုများလာမလားဆိုပြီး စမ်းသပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား (Probiotics) က ၀မ်းပျက်တဲ့သူတွေ မှီဝဲရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ ၀မ်းချုပ်တဲ့ လူတွေမှာ Probiotics ပေးလိုက်ရင် ပိုကောင်းမလား ဆိုပြီး စမ်းသပ်နေကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ BioFeedback ဆိုတာ ပေါ်လာပါတယ်။ ၀မ်းသွားနေတဲ့ အချိန်မှာ ဦးနှောက်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဘယ်နေရာမှာ အားနည်းတယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ ချို့ယွင်းတယ် စတာတွေကို စမ်းသပ်တာဖြစ် ပါတယ်။ ပြီးရင် ၀မ်းမှန်မှန် သွားတတ်အောင် ကလေးလိုမျိုး ၀မ်းသွားတာ ပြန်သင်ပေးရပါတယ်။ ဒါကို Pelvic Flow Exercise လို့ ခေါ်ပါတယ်။
မေး။	။ ဆရာတို့ ခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်တွေဆီကို ၀မ်းချုပ်တဲ့ လူနာတွေက ဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့ ရောက်လာ တတ်ပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ။	။ ၀မ်းချုပ်ပြီး လာတဲ့ လူနာတွေက ပုံစံမျိုးစုံပါပဲ။ တချို့ကလည်း အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးနဲ့ ရောက် လာတတ်ပြီး တချို့လူနာတွေကျတော့ ၀မ်းသွားရင် သွေးပါလို့ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် လိပ်ခေါင်းဖြစ်နေလို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက လူနာတွေက စအိုကွဲတာ (Anal Fissure) နဲ့ လာပြတတ်ပါတယ်။ စအိုကွဲတယ်၊ နာတယ်၊ ၀မ်းသွားလို့ အဆင်မပြေဘူး . . စတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ရောက်လာတတ်သလို တချို့လူနာတွေကျတော့လည်း ၀မ်းချုပ်တယ် ဆိုပြီး ပုံမှန်ရောက်လာပေမယ့် အကြောင်း ရှာရင်းရှာရင်း အူကင်ဆာ ဖြစ်နေတာကို သွားတွေ့ရပါတယ်။
မေး။	။ ၀မ်းမချုပ်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်မှု ပုံစံကို လိုက်နာသင့်ပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ။	။ ၀မ်းမချုပ်အောင် လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေကို အကြမ်းဖျင်းပြောရရင်တော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက အချိန် ၏မှန်မှန် ၀မ်းသွားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ရေများများ သောက်ရမယ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံ များများစားပေးရပါမယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်။ ပြီးရင် ၀မ်းသွားတာကို အာရုံစိုက်ပြီး ပုံမှန်သွားနိုင်အောင် ကျင့်ပေးရပါမယ်။
မေး။	။ ဆရာတို့ဆီ ၀မ်းချုပ်တဲ့ လူနာတစ်ဦး ရောက်လာရင် ဘာကြောင့် ၀မ်းချုပ်ရသလဲဆိုတာကို ဆရာတို့ ဘယ်လိုရှာဖွေရပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ။	။ ဆရာတို့ဆီဝမ်းချုပ်တဲ့ လူနာရောက်လာရင် ကုလို့ရတဲ့ရောဂါကြောင့်လားဆိုတာ လိုက်ရှာရပါတယ်။ ဥပမာ- စအိုကျဉ်းနေလို့လား၊ စအိုကွဲနေလို့လား၊ လိပ်ခေါင်းကြောင့်လားစတဲ့ အချက်တွေကို ရှာပြီး ကုသမှုပေးရပါတယ်။ ဒီ့ထက် ပိုအရေးကြီးတာက အူကင်ဆာပါ။ ကင်ဆာကို ရှာပြီး ကုသပေးရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဒီလူနာ ၀မ်းချုပ်တာက ဘာကြောင့် ဖြစ်တာလဲ၊ ဆေးတွေကြောင့်လား၊ ရေသောက်နည်းလို့ ဖြစ်တာလား၊ အစားအသောက်ထဲမှာ အသီးအရွက်မပါလို့ ဖြစ်တာလား၊ လှုပ်ရှားမှု မရှိလို့ဖြစ်တာလားစတဲ့ ပင်မအကြောင်းရင်းတွေကို ရှာရပါတယ်။
မေး။	။ ၀မ်းချုပ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများပြည်သူကို ထပ်မံ ပညာပေးလိုတာ ရှိရင်သိပါရစေ ဆရာ။
ဖြေ။	။ ကလေး ဘ၀ကတည်းက ပုံမှန် ၀မ်းသွားတတ်တဲ့ အကျင့်လုပ်ပေးရပါမယ်။ ၀မ်းသွားတဲ့အခါ တွေးချင် တာ တွေး၊ သတင်းစာတွေဖတ် . . အဲဒီလိုတွေ မလုပ်ဘဲ ၀မ်းသွားတာကို သေချာအာရုံစိုက်ပြီး သွား ပေးရပါမယ်။ ၀မ်းမသွားလို့ ၀မ်းနုတ်ဆေး တစ်လုံးစား၊ နှစ်လုံးစားနဲ့ဆေးတွေ တဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အခါ အူကအလိုလိုမညှစ်တော့ဘဲ ၀မ်းက ပိုချုပ်လာတတ်ပါတယ်။ ၀မ်းချုပ်တာကြာလာရင် လိပ်ခေါင်းရောဂါ၊ စအိုကွဲတာ၊ အူကင်ဆာ စတာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ၀မ်းချုပ်တာ တစ်ခါတလေဆိုရင် ၀မ်း နုတ်ဆေးသောက်တာ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် ကြာလာရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့သွားပြသင့်ပါတယ်။ အကောင်း ဆုံးကတော့ သဘာဝအတိုင်း ၀မ်းသွားအောင် လေ့ကျင့်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Related Items:Constipation, Featured
၀မ်းချုပ်တဲ့ ကလေးဝမ်းမှန်အောင် ဘယ်လိုကျွေးသင့်သလဲ . . .
နေ့စဉ် အူလှုပ်ရှားမှု ကောင်းပြီး ၀မ်းမှန်မှန်သွားစေမည့် နည်းလမ်းလေးရပ်
၀မ်းနုတ်ဆေး တလွဲသုံးခြင်း (Laxative Abuse)